Pulpit Krakonoš - PetrPikora.com
PetrPikora.com on August 9, 2019
Ugwu ahụ dị elu bụ Giant Mountains, dị na ókèala Czech-Polish na Western Silesian Ridge dị n'etiti Vysoké Kolo na Violík, ihe dị ka 7 km NW site na Špindlerův Mlýn. N’akụkụ ọnụ ugwu Polish ahụ bụ Onye Ntugharị nke Ọdọ Mmiri Ahụ, ma eleghị anya ụlọ kacha atọ ụtọ (na nke kachasị ahụkebe) n’elu oke ugwu.
Elu elu Czech nke High Plains (ebe kachasị elu na mpaghara Czech) dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke ụlọ ntụgharị na 1490 m asl. Dika usoro oru ngo nke puku puku Bohemia, Moravia na Silesia, nke a bụ nke a na-akpọ ọnụ ọgụgụ kacha elu nke Vysoké Kola, n'ihi na elu nke Czech elu (ịdị elu site na ndagwurugwu ahụ na Vysoké Kolo) erughị 1497 m.
A ga-enweta ugwu ahụ dị elu n'ụzọ akara uhie maka ọbụbụenyi Czech-Polish ma ọ bụ n'ụzọ akara edo edo si Labská bouda.
N'afọ 1837, ya bu na nmalite Krkonošenjem nlegharị anya, ụlọ ntu nwere ebe ezumike na ebe mgbaba maka ndị 2 ka e wuru n’ebe ndị a, Krkonošeụlọ a rụrụ naanị maka ebumnuche ndị njem. Ka otu afọ nke 1858 wuru ụlọ ụlọ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ forụ maka ndị 50 ekwelarị n'abalị maka ndị 21. N'afọ 1896 - 97, na ebumnuche nke ezinụlọ Schaffgotsch, e wuru ụlọ nkwari akụ ugwu otutu ụlọ Schneegrubenbaude site na ụlọ nche na-ele anya, ya na ime ụlọ abụọ nke 44 na ọtụtụ ebe iri nri. N'oge Agha IIwa nke Abụọ ụlọ nkwari akụ ahụ ghọrọ ebe ezumike nke Luftwaffe nke German. Mgbe otu afọ nke 1945 gasịrị, a malitere ịkpọ ụlọ ahụ Wa Wawel, n'ihi na ọ yiri ya na Royal Castle nke Krakow. Na 1950, Polish Tourist Club PTTK mepere ebe nri na naanị akwa ole na ole na nkwari akụ mbụ, bụ nke jere ozi ruo 1960, mgbe etinyere onye na-ebugharị TV na-adịru nwa oge na mkpọmkpọ nke mgbidi nke ụlọ nkwari akụ mbụ iji bufee mgbaàmà site na Egwuregwu Olympic na Rome. E wughachiri ụlọ ahụ n'afọ 1960-1964 na 1974-1978.
Olulu mmiri kpụkọrọ akpụkọ (German Schneegruben, Polish Śnieżne Kotły) bụ nnukwu mkpọda ugwu ugwu na mkpọda nke ugwu na ọwụwa anyanwụ nke Oke Ugwu. A na-akpọ olulu dị na ndagwurugwu ugwu obere Snoo 550 m dị elu, na ala nke ọdọ mmiri Śniecialne Stawki dị larịị. Ogige snow bụ ezigbo ihe atụ nke ọdịdị ala, ọtụtụ osisi na-adịghị ahụkebe (dịka snow saxifrage, saxifrage, wdg).
Nkume KrakonošElu ala